BREAKING Rabshadaha oo kusii faadayo gudaha Israa’iil inta lagu guda jiro dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israaiil | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii BREAKING Rabshadaha oo kusii faadayo gudaha Israa’iil inta lagu guda...
Tirada dhimashada Qaza ayaa kor u dhaafaysa 84 iyadoo duulimaadyada Israel ay sii xoogeysanayaan:
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa duqeynaya dhismooyinka dhaadheer iyo bartilmaameedyo kale oo kuyaala Qaza halka rabshadaha sidoo kale ay ku faafeen gudaha Israel.
Falastiiniyiinta ayaa kaqeyb galaya aaska 15 qof oo lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo ay Israa’iil ka fulisay magaalada Qaza [Haitham Imad / EPA]
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa wali sii wada weerarada ay ku hayaan dhismooyinka dhaadheer iyo bartilmaameedyada kale ee Marinka Gaza iyadoo Falastiiniyiinta ay khamiistii xuseen ciida ciidul fidriga oo ay ku jiraan duqeyn diyaaradeed oo aan kala joogsi lahayn.
Tan iyo markii weerarka Israa’iil uu billowday galinkii dambe ee Isniintii, wasaaradda caafimaadka ee Qaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 84 qof, oo ay ku jiraan 17 carruur ah la dilay. In ka badan 480 kale ayaa lagu dhaawacay.
Ugu yaraan lix Israa’iiliyiin ah iyo hal muwaadin Hindi ah ayaa sidoo kale la dilay. Ciidanka Israa’iil waxay sheegeen in boqolaal gantaal laga soo tuuray Qaza oo ku wajahan goobo kala duwan oo Israa’iil ka mid ah waxayna ku kordhiyeen xoojin u dhow dhulka bariga ee xadka.
Waxaa sidoo kale jiray iska hor imaadyo rabshado wata oo udhaxeeya Yuhuuda Israa’iiliyiinta iyo muwaadiniinta Falastiin ee Israa’iil magaalooyin dhowr ah oo kuyaala gudaha Israel.
33 daqiiqo kahor (13: 39 GMT)
Israa’iil waxay eegaysaa garoon diyaaradeed maadaama baajinta duulimaadyadu sii kordhayaan
British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa iyo Iberia ayaa dhamaantood baajiyay duulimaadyadii ay ku tagi lahaayeen Tel Aviv iyadoo xamaaliin reer Yurub ah ay ku biireen shirkadaha diyaaradaha Mareykanka si ay uga fogaadaan in ay u duulaan Israel, taas oo dhaqaajisay garoon diyaaradeed oo kuyaala koonfurta fog si looga taxadaro gantaalada ka imanaya Gaza.
“Badbaadada iyo amniga asxaabteena iyo macaamiisheena had iyo jeer waa muhimadeena koowaad, waxaana sii wadeynaa inaan si dhow ula socono xaalada,” British Airways ayaa sidaas tiri ka dib markii ay baajisay duulimaadyadeedii iyo kii ka imanayay Ben Gurion khamiistii.
2 saac kahor (12:35 GMT)
Wafdiga Masar ee ku sugan Tel Aviv wadahadalada xabad joojinta
Wafdi Masaari ah ayaa ku sugan Tel Aviv si ay wadahadalo ula yeeshaan mas’uuliyiinta Israel taas oo qayb ka ah dadaalada wadahadalada xabad joojinta colaada sii kordheysa ee Gaza, saraakiisha sirdoonka Masar ayaa sidaas sheegay.
Labada masuul ayaa ka hadlay magacooda in aan la shaacin sababo la xiriira in loo diiday inay warbaahinta faahfaahin ka siiyaan. Isla weftiga ayaa la kulmay saraakiisha Xamaas ee Marinka Gaza marka hore, ayay yidhaahdeen, waxayna uga sii gudbeen dhinaca Israa’iil dhinaca dhulka. Masar ayaa door dhexdhexaadin ah ka ciyaartay waagii hore labada dhinac.
Previous articleSidee Daarasalaam ee magaalada Muqdisho looga ciiday maanta
Next articleMaxaa kala haysta Madaxda Dalalka Turkiga iyo Farnsiiska?
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta Caadil bin Cabdul Raxman Al Casumi ayaa walaac weyn ka muujiyay rabshadahii maalmo kahor ka dhaca Magaalada Muqdisho ee u dhexeeyay...
Dacwad oogayaasha dalka Turkey oo baaritaan ku billaabay duqa magaalada...
Gabar jlaa ah oo Reer faransa ah oo si ay cabashdeeda...